ဘောလုံးပွဲများမှာ မဆဲဖို့ – လူထုဦးလှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘောလုံးပွဲများမှာ မဆဲဖို့ – လူထုဦးလှ
ဘောလုံးပွဲများမှာ မဆဲဖို့ – လူထုဦးလှ
Posted by Mr. MarGa on Aug 13, 2013 in Copy/Paste | 25 comments
ဗထူးကွင်း ဘောလုံးပွဲများတွင် အလွန်ဆဲနေကြသည်ဟု မိတ်ဆွေများက ပြောကြသည်။ ခဏခဏပင် ပြောကြသည်။
ကျွန်တော် ဘောလုံးပွဲသို့ မရောက်သည်မှာ တော်တော်ပင်ကြာပြီ။ ထို့ကြောင့် ဘောလုံးပွဲအကြောင်း ဘာမှမသိ။ သို့ရာတွင် ဘောလုံးပွဲတွင် ဆဲကြသည်၊ အလွန်ပဲ ဆဲနေကြသည် ဆိုသောသတင်းကို ကြားရသောအခါ အများကြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်၊ ဝမ်းနည်းမိသည်။
၁၉၄၇-၄၈၊ ၄၉-၅၀၊ ၅၁-၅၂ ခုနှစ်လောက်ထိ ယခင်က ယူဘီအေကွင်းဟုခေါ်သော ဗထူးကစားကွင်းတွင် ကျွန်တော်တို့တတွေ လူကြီးလုပ်ပြီး ဘောလုံးပွဲများ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ စစ်ပြီးကာစပွဲများ၌ ဆဲကြပါသည်။ ရန်ဖြစ်ချင်ကြပါသည်။
သို့ရာတွင် နောင်တော့ မဆဲကြတော့ပါ။ တစ်ယောက်တစ်လေ၏ အသံကြောင့် ဆဲသံများပင် ထွက်ပေါ်၍မလာပါ။ ရန်ခိုက်ဒေါသလည်း မဖြစ်ကြပါ။
ထို့ကြောင့် သမ္မတကြီး ဒေါက်တာဘဦး ကြုံ၍ ဘောလုံးပွဲလာကြည့်သည့်အခါ၌လည်းကောင်း၊ အခြား ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ လာကြည့်ကြသည့်အခါလည်းကောင်း ကျွန်တော်တို့က ကောင်းကောင်း ကြွားလေ့ရှိကြသည်။
ကြွားသည် ဆိုရာ၌လည်း မဏ္ဍပ်တိုင် တက်ကြခြင်းမဟုတ်၊ ကြိတ်၍ ဂုဏ်ယူကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်က ရန်ကုန်ဘောလုံးပွဲများတွင် အလွန်ဆဲနေကြသည်။ အစိုးရလည်း ဘာမှမတတ်နိုင်။ ဘယ်သူမှလည်း ဘာမှမတတ်နိုင်။
ထို့ကြောင့် သမ္မတနှင့် ရန်ကုန်က လူကြီးများလာလျှင် ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲများကို အံ့ဩနေကြသည်။ ရပ်ဝေးမိတ်ဆွေအချို့က ခင်ဗျားတို့ ဘောလုံးပွဲတွေက “ဆဲလည်း မဆဲပါလား” ဟု ဆိုကြသည်။
“ဆဲစေချင်လို့လား” ဟု ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများကို ပြန်၍မေးသောအခါ ထိုမိတ်ဆွေများက ” မဟုတ်ပါဘူးဗျာ သဘောကျလွန်းလို့ပါ ” ဟု ပြန်ပြောကြသည်။
မော်လမြိုင်က လာသောဧည့်သည်၊ ပုသိမ်က လာသောဧည့်သည်များကလည်း “ဆဲသံမကြားသော ဘောပွဲကို မန္တလေးရောက်မှပဲ တွေ့ရတော့တယ်” ဟု ထုတ်၍ ပြောဆိုကြသည်။
တစ်ဦးနှစ်ဦးကမူ “မန္တလေးမှာမို့လို့ ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာပါပဲဗျာ” ဟု ဆိုကြသည်။
“မန္တလေးကတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု စုရာနေရာကိုး၊ ဒါကြောင့်ဒီလိုယဉ်ကျေးကြတာပဲ” ဟု အချို့က ဆိုကြသည်။
“ထီးနန်းအရိပ်၊ ရှေးမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအပြင် ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားတဲ့မြို့၊ တရားတော်အဆုံးအမ ခံယူနေကြတဲ့လူတွေကိုးဗျ” ဟု ဆိုသူများက ဆိုလိုက်ကြသေးသည်။
ပွဲကြည့်ပရိသတ်သည် အိမ်တွင် ဆဲချင်ဆဲမည်၊ အရပ်ထဲတွင် ဆဲချင်ဆဲမည်၊ ဘောလုံးပွဲတွင်မူ တစ်ခွန်းမှမဆဲ၊ ယောင်လို့မှမဆဲ၊ ‘ငါ’ ပင် မတိုင်းတော့။
အိမ်က ငါးပါးသီလ ယူလာကြလျှင်ပင် ဤမျှ စောင့်စည်းကောင်းမှ စောင့်စည်းကြမည်။ ဘောလုံးပွဲထဲသို့ ရောက်သောအခါ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အကဲကြည့်ပြီး ဘယ်သူမှ မဆဲသောကြောင့် ယောင်ပြီး ဆဲတတ်သူကလည်း မိမိနှုတ်ကို မိမိ သတိထားပြီး ထိန်းသည်။
ဤသတင်းကောင်းများသည် စိတ်ကူးယဉ်ပြီး လုပ်ကြံ၍ ရေးနေသည်များမဟုတ်၊ နှစ်၊ လ ဘာမှ မကြာသေး၍ မှတ်မိသူတွေ အများကြီး ရှိကြပေသေးသည်။
တစ်ခါက ဘောလုံးပွဲကြည့်သော ပရိသတ်ကို ကျွန်တော်ပြောပြသည်။
“ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ရန်ကုန်ဘီအေအေကစားကွင်း (ယခု အောင်ဆန်းကစားကွင်း) မှာ ထိုအခါက ပထမတန်းအသင်းတစ်သင်း ဖြစ်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြူနီစီပယ်အသင်းကနေပြီး ကစားဖူးတယ်။ ကျွန်တော်က တရုတ်နှင့် နည်းနည်းတူလို့ ‘ခွေးမသားတရုတ်ကိုချ’ ဟု အော်သံများ နားထဲ တိုးတိုးဝင်လာတယ်။ အိမ်ကဆွေမျိုးတွေလည်း သူတို့ဆဲလို့ အားလုံးပဲကုန်ကြပြီ (ရယ်ကြသည်)။ ”
“ကျွန်တော်က လက်ဝဲအတွင်းလူအဖြစ် ကစားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော် ဂိုးသွင်းလို့ ဝင်သွားတဲ့အခါ ပရိသတ်ထဲက ‘ဒါမှ ငါ့သားကွ’ ဟု အားရပါးရ ဩဘာပေးသံများ ကြားရတယ်။ ဂိုးသွင်းရာတွင် အပြင်ထွက်သွားတဲ့အခါများမှာတော့ အိမ်ကဆွေမျိုးတွေ ကုန်ပြန်ပြီ။ ဘယ်ဘက်ကမှ မသက်သာဘူး။ ”
“တစ်ခါ သတင်းစာလုပ်ငန်းဘက်လုပ်၊ နိုင်ငံရေးဘက် စိတ်ထက်သန်လာတော့ အပေါင်းအသင်းဖြစ်တဲ့ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးဘစိန်နဲ့ မိတ်ဆွေများက ‘ လာ ကိုလှ၊ ဇာတိသွေး ဇာတိမာန် သွားတင်ရအောင်’ ဆိုပြီး ဘောလုံးပွဲအသွား ကျွန်တော့်ကို ဝင်ခေါ်လေ့ရှိကြပါတယ်။”
“ထိုအခါက ဗြိတိသျှ လက်အောက်ဖြစ်တော့ ဂျမခန်နာ ကလပ်အသင်းက အင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူ၊ အထက်တန်းအရာရှိကြီးတွေ ကစားကြတာကိုး။ သူတို့အသင်းက တော်တော်ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့အလုပ်က ‘ချဟဲ့’ တို့ ဘာတို့အပြင် ဒီ မျက်နှာဖြူတွေကို အားရပါးရ ဆဲကြရတာကိုး။ နယ်ချဲ့သမားတွေ အုပ်စိုးနေတာကို မကြိုက်လို့ အပြင်မှာ ဆဲရင် အဖမ်းခံရမှာသေချာတယ်။ တမတ်ပေးပြီး ဘောလုံးပွဲထဲမှာ တစ်နာရီလုံးလုံး ဆဲနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ။”
“အခုတော့ဖြင့် နယ်ချဲ့မျက်နှာဖြူတွေလည်း မရှိကြတော့ပါဘူး။ အားလုံး ကိုယ့်အချင်းချင်းတွေချည်းပဲ။ ဒါကြောင့် မဆဲသင့်ကြတော့ဘူး။”
“မျက်နှာ အပေါ်မော့ပြီး တံတွေးထွေးရင် ကိုယ့်မျက်နှာပေါ် တံတွေးကျသလိုပဲ။ ဆဲတာကလည်း စဉ်းစားကြည့်ရင် မျက်နှာပေါ် တံတွေးထွေးတာလို ဖြစ်နေပါတယ်။”
“ရဲအသင်းကလူတွေကို တချို့က ဆဲချင်ကြတယ်။ နည်းနည်းပါးပါး ဆဲသံပင် ကြားလိုက်မိပါသေးတယ်။ တကယ်ဆိုတော့ သူတို့ ဘယ်သူတွေလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ တူတွေ၊ ညီတွေပဲ မဟုတ်လား။ သူတို့တတွေပဲ လူဆိုးသူဆိုးတွေရန်ကို ကာကွယ်ပေးနေကြတာပဲ။ ရွှေကူ၊ စောပြည့်၊ မောင်ညွန့်၊ အေးမောင်၊ သာဒွန်းတို့တစ်တွေဟာ ရန်ကုန်ကအသင်းတွေ လာကစားတော့ ကျွန်တော်တို့ အားကိုးရတဲ့လူငယ်တွေမဟုတ်ဘူးလား။ ‘ချဟဲ့’ ဆိုလို့ တစ်ဖက်က တကယ်ချလိုက်တာနဲ့ သူတို့နာသွားတော့ အထက်မြန်မာပြည် လက်ရွေးစင်၊ မြန်မာပြည်က ဘောလုံးသမားကောင်းတစ်ယောက် နစ်နာသွားမှာ၊ ဆုံးရှုံးသွားမှာပဲမဟုတ်လား။”
“တပ်မတော်အသင်းကနေပြီး ကစားတဲ့ ရဲဘော်တွေ၊ အရာရှိတွေကို ကြည့်ပါဦး။ သူတို့တစ်တွေဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တူတွေ၊ ညီတွေ၊ အစ်ကိုတွေပဲ မဟုတ်လား။ တိုင်းပြည်ရဲ့ လွပ်လပ်ရေးကို ရင်မြေကတုတ် လုပ်ပြီး ကာကွယ်နေကြတဲ့ ရဲဘော်တွေပဲ။ ဆဲရင် ကျွန်တော်တို့အမှားပေါ့။ ”
“အမရပူရ မော်တော်ယာဉ်အသင်း၊ စစ်ကိုင်းအသင်း၊ ကျောက်ဆည်၊ မိတ္ထီလာ အသင်းသားတွေ၊ ဌေးဌေး၊ မောင်အုန်း၊ ဘတင်၊ ဘကြူး၊ လှဘူး၊ လှမောင်တို့ပါတဲ ့မြို့မအသင်း၊ အဲဒီလူငယ်တွေကို တစ်ယောက်စီ ကြည့်ကြပါဦး။ ဘယ်သူ့ကိုများ ဆဲစရာတွေ့ပါသလဲ။ သူတို့တစ်တွေဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ အားကိုးရတဲ့ လူတော်ကလေးတွေပဲ။”
“ရမ်းရမ်းကားကားကစားလို့ ဆဲတယ်ဗျာ လို့ တစ်ချိုက ဆိုကြလိမ့်မယ်၊ ရမ်းတဲ့လူကို ဘာဆဲဖို့လိုသလဲ၊ လူထုပရိသတ်ရှေ့မှာ သူတို့အရှက်ကွဲနေပါပြီ။ ဘယ်သူမှာ ဘယ်လိုအကျင့်စာရိတ္တမျိုးရှိတယ်ဆိုတာ ဘောလုံးကစားရာမှာ အပေါ်ဆုံးပေါ့။ ဒိုင်လူကြီးကလည်း သူ့ကို အပြစ်ပေးမှာပဲ။”
“ဒိုင်ညစ်လို့ ဒိုင်ကို ဆဲတာဗျာ” လို့လည်း တချို့က ပြောကြပါလိမ့်မည်။
“ဒိုင်ညစ်ရင်လည်း မဆဲပါနဲ့၊ ဒိုင်ညစ်တယ်ဆိုတာကလည်း လူပုံအလယ်မှာ ညစ်ရတာမို့ သူ့ဘာသာသူ အရှက်ကွဲနေ၊ ဂုဏ်ပျက်နေပါပြီ။”
“တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဒိုင်က ရိုးရိုးသားသား သူမြင်တဲ့အတိုင်း အဆုံးအဖြစ်ပေးကြတာပဲ၊ ပရိသတ်အမြင်နဲ့ မကိုက်ပဲ ရှိနေတတ်တယ်။”
“ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘက် အားပေးကြပါ၊ လက်ခုပ်တီးကြပါ၊ ဆဲသာမဆဲပါနဲ့။”
“ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးကို မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားသောမြို့မို့ အရပ်ရပ် အနယ်နယ်က လေးလေးစားစားရှိကြတယ်။ အတုခိုးကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဆဲနေကြရင် အရှက်ကွဲကြရောပေါ့ဗျာ” စသည်ဖြင့် တင်ပြဆွေးနွေး၊စဉ်းစားစေကာ အဆဲကိုတားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဘောလုံးကစားသူများ တမင် ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းကြီး ကစားသည်မျိုးကိုလည်း တားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ပရိသတ်များသည် မဆဲကြရသော်လည်း ပျော်ကြပါသည်။ အားကစားစိတ်ဓာတ်မြင့်မြင့်နှင့် ကစားသော ဘောလုံးပွဲကောင်းများကို ကြည့်ကြရသောကြောင့် ကျေနပ်ကြသည်။ ပွဲကြည့်ပရိသတ်၌လည်းကောင်း ကစားသူများ၌လည်းကောင်း လောင်းကစားစိတ်ဓာတ်မျိုး မရှိကြပေ။
ထို့ကြောင့် အောက်မြန်မာပြည်အသင်း လာကစားသောအခါ မကြာမကြာ ကျွန်တော်တို့က အနိုင်ကစားလိုက်နိုင်ကြသည်။ နိုင်ငံခြားအသင်းများ လာကစားလျှင်လည်း ကောင်းကောင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြသည်။ ဘယ်အသင်း လာကစားလာကစား “မန္တလေး ဘောပွဲကြည့်ပရိသတ်က မဆဲဘူး၊ အားပေးရာမှာလည်း မျှတယ်၊ တော်လျှင်တော်သလို ဟိုဘက်ဒီဘက် အားပေးတယ်၊ ရန်ကုန်မှာဒီလိုမဟုတ်ဘူး” စသည်ဖြင့် ပြောကြသည်။ မန္တလေးက ပွဲကြည့်ပရိသတ်၏ အားကစားစိတ်ဓာတ်ကို ထုတ်ဖော် ချီးကျူးသွားကြသည်။ မှတ်တမ်းများတွင် ရေးသွားကြသည်။ ဤကား မန္တလေးမြို့သူမြို့သားများ ရခဲ့သည့် ဂုဏ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် အုပ်ချုပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ရော့ရော့ရဲရဲ နိုင်လာပြီး စည်းကမ်းများ ပျက်လိုက်လာသည်ဟု ကြားရသည်။ ဤသတင်းများကို ရန်ကုန်ထောင်တွင်းမှနေ၍ ကျွန်တော်ကြားရသောအခါ အများကြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။
မှန်းတွဲပွဲ လောင်းကစားတစ်မျိုးကို ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေး ကောင်စီဆရာများ ထွင်လိုက်သောအခါ အများဆဲ၊ တအားဆဲ၊ သောက်ကျိုးနည်း ဆဲကုန်ကြတော့သည်။
ယခုသော် မှန်းတွဲပွဲ၏အမွေဆိုး ‘အဆဲ’ သည် ဗထူးကွင်းတွင် မင်းမူလျက် ရှိနေပေပြီ။
ခွန်အားမွေးပြီး ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ကာ အစွမ်းကုန်ယှဉ်ပြိုင်ကြရသည့် အားကစားစိတ်ဓာတ်မွေးမြူရာ ဗထူးကွင်းသည် ယခုသော် အစွမ်းကုန်ဆဲရေးရာဋ္ဌာနကြီး ဖြစ်နေပေပြီ။ ဤသို့ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့သူမြို့သားများအနေနှင့် အများကြီး အရှုံးပေါ်နေသည်။ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်နေသည်။
ထို့ကြောင့် ပြုပြင်ရေးအတွက် အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုကြောင့် လေးလေးနက်နက် နှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
ဆဲသူများအားလည်း ရပ်တန့်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်အပ်ပါသည်။
သောင်းပြောင်းထွေလာရေးချင်ရာရာ (ဒုတိယအကြိမ်) စာမျက်နှာ ၃၄၁-၃၄၇။
ပြောရန် စကားလုံး မရှိ
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဘောလုံးပွဲတွေမှာ ပြဿနာ ဖြစ်တာတွေ ပိုလို့ ကြားလာ မြင်လာရတာရယ်
မကြာမီ အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပမယ့် ဆီးဂိမ်းမှာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး အားပေးမှုကို မြင်ချင်တာရယ်ကြောင့် ဒီစာကို တင်လိုက်တာပါ။
ဟိုတစ်ချိန်က ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်လို ထိန်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ သိစေဖို့
နောက် တစ်ချိန်က ဒီလိုတွေ ရှိသေးပါလား ဆိုတာကို မှတ်မိစေချင်လို့ (မီတဲ့သူတွေ ရှိသေးလားတော့ မသိ)
ဒီလို တင်ရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း
ဘောပွဲတွေမှာ မဆဲဖို ့…
ပွဲကြည့်သူများ .. ပွဲ အဝင် မှာ..
ပါးစပ်မှ ကပ်ဖို ့.. တိတ် တစ်ခုစိ ပေးဝေရမည် ။
မကပ်သူ ကို ပွဲခင်းထဲ မှ ထုတ်ပစ်မည် ။
စာပြန်ရန် စကားလုံး မရှိ။
လောင်းကစားပါ ဖက်လာလို့ ပိုဆိုးသွားတယ် ထင်မိတာပါပဲဗျာ…
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည် လာတဲ့အခါ
ဆဲဆိုခြင်းတွေ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်မှုတွေ နည်းသွားမယ် ထင်ဒါဘာဗျဲစ်ကွယ် ….
အေးလေ .. ညန်မာဒွေ အများစု စိတ်ဓါတ်ကိုက ဂလိုဘဲဂိုးး
နာလည်း အိုက်ထဲပါမယ် ထင်ဒယ် …
ဟိုတစ်ခါ ညန်မာပွဲတွေ ကျိဒုန်းဂလို ….
ဒိုင်လူဂျီး ဘက်လိုက်ဒယ်ကွာ … အိုက်ဒိုင်ကို ကန်ပလိုက် …
ဆိုပီး အားပေးဂဲ့ဒေးဒယ် … ဟီးးးဟီးးးး
လူထုဦးလှ – လူထုသတင်းစာ (၂၇.၈.၆၃)
မြန်မာဟာ.. ဘယ်ခေတ်နေနေ.. ဘယ်စနစ်အောက်ရောက်ရောက်… ဘယ်နိုင်ငံပြောင်းနေနေ.. မြန်မာ့အတွေးအခေါ်.. အကျင့်စရိုက်ပဲ…
လူနဲ့.. သူ့ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်တွေကို လွှမ်းမိုးပြုပြင်ပေးတာ.. ထိုလူရဲ့ယုံကြည်ရာ.. ဘာသာရေးပါ..
ဒီ သဂျီးကတော့ လုပ်ပြီ။
အဲဒီ အကျင့်စရိုက်ကို ရအောင် ပြင်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတာ
ဒီအကျင့်ဟာ နောက်လူတွေရဲ့ ဆက်ခံပုံ မကောင်းလို့ ပြောင်းသွားတယ် ဆိုတာ
မြန်မာ့ အတွေးအခေါ် အကျင့်စရိုက်ဟာလည်း
ပြင်နိုင်ပါတယ်၊ ပြင်လို့ရပါတယ် နော့
ဒါပေမယ့်.. ဒီလောက်နှစ်ထောင်ချီရိုက်သွင်းထားမှတော့… အနည်းဆုံးမျိုးဆက် ၁ခုလောက်တော့ ရင်းရမယ်..။
ဒါတောင်.. အခုခေတ်လူငယ်တွေ..သိပြီး.. အခုထပြင်မှနော… :gee:
ဒီလို ပြင်လို့ ရတယ် ဒီလို ပြင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အသိကို ရအောင်သွင်း
သူတို့တတွေက နောက်မျိုးဆက်ကို အကောင်းဆုံး နမူနာတွေ ပေးခဲ့
ဘယ်သူမှတော့ အခုသိ အခု ထမပြင်တာ သေချာတယ်ဗျ
အချိန် နည်းနည်းတော့ ယူမှာပဲ….
တခါက ဖြစ်သည် ။ ဆီမီးပရို ပြိုင်ပွဲ တခုတွင်လည်း ဖြစ်သည်။
အတန်းတက် ဖို့အဆုံးအဖြတ်ကစားသောပွဲလည်း ဖြစ်သည်။
မိမိတို့ မနည်းရုန်းကန်ကြိုးစားလာခဲ့သော မပျော့်တပျော်တန်း အသင်းနှင့်
မီဒီယာ တခုထောင်ထားသော အသင်းနှင့် တွေ့သည်။
မီဒီယာအသင်း ဒိုင်နှင့်ပေါင်းပီး ကောင်းကောင်းညစ်တော့သည်။
ဂိုးရအောင်သွင်း… ရသွားတော့ လူချ အချိန်ဆွဲ ..ဘေးကန် နှင့် ပေါ့…။
ဘောင်အတွင်းကညစ်ကြသည်။ ဒိုင်ကလည်း သိသိသာသာ ဘက်လိုက်သည်။ မိမိတို့ အော်ဆဲကြသည်။
ထိုစဉ် သူရို့အသင်း ဘက်က တာဝန်ရှိသူတဦး(အထင်)
က မိမိတို့ဘက် လှည့်ကာ ကော့ပြသည်။
မိမိတို့လည်း သည်းမခံနိုင်သည့်အဆုံး ဘောကန်ဖိနပ်စာကျွေးလိုက်သည်။
ဘောကန်ဖိနပ်သာမက အိမ်အပြန်စီးစရာဖိနပ်ပင် မကျန်အောင် အားပေးလိုက်သည်။
တကယ်တော့ ဆင်ထားသည့်အကွက်ထဲ လှလှပပကြီး ဝင်သွားခြင်းသာဖြစ်သည်။
ညစ်လည်းအညစ်ခံရသေး ကော့လည်း အပြခံရသေး ဘောပွဲလည်း ရှုံးသေး အတိုင်လည်းခံရသေးသည့်အပြင်
နောက်၂ရက်အကြာ ဒင်းတို့ ဂျာနယ်မှာ ဒါ့ပုံ နှင့်တကွ ပယ်ပယ်နယ်နယ် သမခံရသေးသည်။
ဘာတဲ့ ..ဂလို ဘောလုံးလူရမ်းကားတွေ ရှိနေလို့ မြန်မာဘောလုံး မြောင်းထဲကမတက် ဆိုတာပဲ..။
nothing lasts forever ပင်..။ ထိုအသင်း ယခင် အဆင့်မြင့်တန်း တက်ကန်ပီး
ဝံဂျီးဌာနတွေ ပူးပေါင်းပညာပေးခံ ထိပီး သကာလ..အသင်းပါပျက်သွား၏။
ဝဋ် ဆိုတာ နောက်ဘဝ မကူးပေ…။ ဒီတခါတော့ …အသံစာစာနှင့် အော်မရတော့..။
ယခုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် မြန်မာ ဘောကလပ်များ အိမ်ကွင်းအားသာချက် အယူလွန်ကြ၏။
အိမ်ကွင်း ပရိတ်သတ် လူစွာလုပ်လွန်း၏ ။ အရက်သေစာ သောက်စား ရမ်းကားတတ်သော ပရိတ်သတ်
ကို ထိန်းဖို့ရန်မှာ တားမြစ်ကန့်သတ်မှု အားနည်းသလို လုံခြုံရေးလည်း အားနည်းဆဲ ဖြစ်သည်။ အသင်းလူကြီးတချို့ပင်
စိတ်ဓါတ်မပြည့်ဝကြသေး။ ဘောသမား ပရိုမပီတာ တော့ လည်း အမှန်။ အစကတည်းကလွဲနေတာက
အရင်လို ဒေသ ကိုယ်စားပြုအသင်းတွေမဟုတ်ခြင်းပင်။ ဘယ်တိုင်း ဘယ်ပြည်နယ် ပြောထားပေမယ့်
တကယ်က ခရိုနီတစု ထောင်ထားသော ဘောကလပ်များသာ။ သူတို့လည်း အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းမှန်း
သိသိကြီးနှင့် မွေးရာမြို့ ၊ တိုင်း ၊ ပြည်နယ် အစွဲ နှင့် မိုက်မိုက်မဲမဲ အားပေးနေရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဘောလုံး ပရိတ်သတ်ပါ .. သို့သော် .. ဘောလုံးတွင် ..ကမာ္ဘ့ဖလား ရအောင်ပဲ အောင်မြင်စေဦး။
ကချင်က ရခိုင်က အမျိုးတွေ ထမင်းမဝတာ စာမသင်ရတာ ပြေလည်သွားမည်မဟုတ်ပါ…။
ကျနော့်မှာ တန်ခိုးရှိလျှင် အဲ့သည့်က ပိုက်ပိုက်တွေ ယူပီး အဆိုပါ အမျိုးတွေဆီက ကလေးတွေကို
အရှေ့တောင်အာရှမှ တချိန်က ဘောလုံး လူရမ်းကား တယောက်
ဒီ ဘောလုံး ဘက်ကနေ နိုင်ငံကိုလဲ ပြန်ကြည့်လို့တော့ ရတာပဲလေ
ဒီ ဘောလုံး ဘာကြောင့် မတိုးတက်သလဲ ဒီ ဘောလုံးကို ဘာကြောင့် ဒီလောက် အားပေးနေသလဲ ဆိုတာကို မငြင်းလိုတော့ပါ။
အဓိက သက်ဆိုင်တာက လူများသာမို့
လောလောဆယ်တော့ မသက်မသာ စောင့်ကြည့်ရုံသာ
သားတို့က ဂျာနယ်တိုက်လေးပဲမီးရှု့ိမယ်ကြိမ်းမိပါတယ်. သားတို့ကို
အမှန်ဆို ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကျေအောင် ချေပစ်သင့်တာ …
အဲသည်တော့ ဆဲစရာလည်းမလို… အကုသိုလ်နဲတယ်… ဟီး ဟီး
ကျန်တဲ့နေရာတွေကနေ ဆဲစရာတွေ ထပ်ထွက်လာတာကျ မပြောဘူး ဟီဟိ
စိတ်ထွက်ပေါက်ကလည်း ဒီ နေရာမှာပဲ ရှိတယ်ထင်ပါရဲ့။
ဂျူး ရဲ့ ဆဲတတ်သူများရဲ့ ညနေ ဝတ္ထုတိုလေးတောင် သတိရမိသေးးးးး
ဆဲတတ်သူများနဲ့ တစ်ညနေ ပါနော့
အဲဒီဝတ္ထုထဲက ကားပျက်လို့ ဆင်းတွန်းရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကို ကြိုက်မိတယ်
ဒီ ဘော်လုံးပွဲ မှာ လူတစ်ချို့ ကိုယ့်အားပေးတဲ့ ဘက်ကို နိုင်စေချင်ပြီး အသည်းအသန် အားပေးတာ အသင်းချစ်စိတ် ထက် လောင်းကြေးနိုင်ချင်လို့ ထင်မိတယ်။
စလဲ ရှုံးရော ကိုယ့်အကျိုး ကို ထိတော့မှာ ကြောင့် အတင်း ရမ်းကြတော့တာလား မသိ။
ပွဲ အားပေးသူ % ဘယ်လောက်က လောင်းကြေး ထပ် ထားလဲ လို့။
ရှေးတုန်းမှာ ကထဲ က အဲလို လောင်းကြေး ရှိခဲ့တယ် ဆိုရင် အတော် မှန်နိုင်ခြေ ရှိတဲ့ အတွေးဘဲ။
ဟို သူကြီးမင်း ဘာသာ ရေး ကို လွဲချတာ ထက် စာရင် ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်တယ်။
(တော်လိုက် တဲ့ ငါ ဟဲ့)
တကယ်ဘဲ ဘာသာရေးမှာ သက်ဝင် ရင် ဒါမျိုး သမာအာဇီဝ မဖြစ်တဲ့ ဟာ မလုပ်လောက်ကြဘူး။
မဆိုင်တာဝင် ဖွ တာတော့ မဟုတ်ဘူး။
အစ္စလာမ်ဘာသာ သက်ဝင် သူတွေ ဘယ်တော့ မှ လောင်းကြေး မကစားဘူး။ အရက်မသောက်ဘူး။
သူတို့ ဘာသာရေး အဆုံးအမ ကို တကယ်ဘဲ လိုက်နာသူများတယ်။
အမုန်းစကား ပါတဲ့ သင်ကြားမှု နဲ့ ငါ ကြီးစိုးရေးဝါဒ ကြောင့်သာ အစွန်းထွက် လွဲ ကုန်ကြတာ။
ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည် မှာတော့ အများစုက ဘုရားရှိခိုး ပြ၊ လျှံနေတဲ့ နေရာတွေ မှာ ဂုဏ်အတွက် အလှူ ဒါနပြုပြ နေရင် ဘာသာရေးလိုက်စား တာဖြစ်ရော။
ကျန်တာကတော့ ဘာသာရဲ့ အနှစ်တွေ၊ လိုက်နာစောင့်ထိန်း ရမှာတွေ ကို ချန်ပြီး ပျော်သလို ပေါ့ပေါ့ ပါဘဲ။
တကယ်လိုက်နာရင် စိတ် ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ က စလို့ ဝိရိယ ထုတ်ရတော့ မှာကိုး။
ဒီတော့ မြန်မာတွေ မှာ ပျင်းတဲ့ ဗီဇ ပါတာ ကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဘာသာရေး ထက် လူ တွေ ရဲ့ တွေးခေါ်မှုအား နည်းမှု ကြောင့်ပါ။
တနည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်နိုင်ဖို့ အတွက် ရှူဒေါင့်မျိုးစုံ က ကြည့်တတ်ဖို့ အခွင့်အရေး တွေ လဲ မရ နိုင်ခဲ့ တာလဲ ပါမှာပါ။
မယုံရင်ကြည့် – အာဏာရှင်ဆန် တဲ့ အစိုးရ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတိုင်း မှာ ဘာသာရေး တွေ ချော်နေတာချည်းဘဲ။
ဘော်လုံးပွဲ ကနေ တရားပွဲ ရောက်သွား တာ စောဒီးပါ ဖိုးသိကြား ရေ။
လူထုဦးလှ ရဲ့ ဒီ စာလေး မဖတ်ဘူးခဲ့သမို့ မျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးတာလဲ မကြာသေးပါဘူး
ဖတ်ပြီးကတည်းက ကြိုက်မိလို့ တင်မယ် ဆိုပြီးတော့
အသေအချာ လက်ရေးနဲ့ ကူးထားတာ
စာရိုက်ရမှာ ပျင်းတာနဲ့ ဒီအတိုင်း ပစ်ထားတာ
အခုမှ အကြောင်းသင့်သွားတာ ဗျ
ညင်ညင်သာသာ ပြောလို့မရတဲ့ အဆင့်ကို ရောက်တော့လဲ
သူတို့နဲ့ ထိုက်တန်တာကိုပဲ ပေးလိုက်တာလို့ ပြောရတော့မှာလား…ဟင်..
နေပြည်တော်- ရန်ကုန်အသင်းသားများအား ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်
Submitted by etrade on Wed, 08/14/2013 – 10:12
နေပြည်တော် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ကွင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရုန်းရင်းဆန် ခတ် ဖြစ်စဉ်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် နည်းပြများနှင့် ကစားသမားများ ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီမှ ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။
စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ အနေဖြင့် ဩဂုတ် (၉)ရက်နေ့တွင် ပဏာမ စုံစမ်း စစ်ဆေးပြီး ဩဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့တွင် တာဝန်ရှိ သူများကို ခေါ်ယူ မေးမြန်းခြင်းနှင့် မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုများ၊ ဓာတ်ပုံ အထောက်အထား များအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ အသင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်များ
(၁) အိမ်ရှင် နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ အသင်း အနေဖြင့် ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ကွင်းအတွင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ကုန်ကျစရိတ် များ၏ ထက်ဝက်ကိုပေးလျော်ရန်။
(၂) ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲ ပထမ အကျော့ ပွဲစဉ်များကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခွင့် မပြုရန်။
(၃) နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ အသင်းမှ ကျောနံပါတ် (၁၂) ခိုင်ထူး အား စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးမူ အပိုဒ်(၄)နှင့် (၁၃)အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲတွင် တစ်ရာသီလုံး ပါဝင် ကစားခွင့် မပြုရန်။
(၄) နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ အသင်း၏ ကျောနံပါတ် (၄) ဇော်လင်းအား စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးမူ (၁၃)အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲမှ စ၍ (၅)ပွဲ ပါဝင်ကစားခွင့် မပြုရန်နှင့် ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ် ငါးသိန်း ပေးဆောင်ရန်။
(၅) နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ အသင်း၏ ကျောနံပါတ် (၁၆) တင်ဇော်မိုးနှင့် ကျောနံပါတ် (၂၉) အရန် ဂိုးသမား ဇော်မျိုးဦး တို့နှစ်ဦးအား စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးမူ အပိုဒ်(၁၃)အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲမှ စ၍ ပွဲစဉ်(၅)ပွဲ ပါဝင် ကစားခွင့် မပြုရန်နှင့် ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ် နှစ်သိန်းစီ ပေးဆောင်ရန်။
(၆) နေပြည်တော် အက်ဖ်စီ နည်းစနစ် အကြံပေး ဦးမျိုးဝင်းနှင့် နည်းပြချုပ် ဦးမျိုးလှိုင်ဝင်း တို့နှစ်ဦးအား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း ရေးမူ အပိုဒ် (၁၃)အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲမှ စ၍ ပွဲစဉ်(၃)ပွဲ ကွင်းအတွင်း ဝင်ရောက် ကြီးကြပ်ခွင့် မပြုရန်နှင့် ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ် ငါးသိန်းစီ ပေးဆောင်ရန်။
ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အက်ဖ်စီ အသင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်များ
(၁) ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်း လက်ထောက်နည်းပြ ဦးတင်မောင်ထွန်းအား စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးမူ အပိုဒ်(၁၃) အရ ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲမှ စ၍ ပွဲစဉ်(၃)ပွဲ ကွင်းအတွင်း ဝင်ရောက်ကြီးကြပ်မှု မပြုရန်နှင့် ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ် ၅ သိန်း ပေးဆောင်ရန်။
(၂) ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် အသင်းမှ ကျောနံပါတ်(၈) ကြည်လင်းအား ၂၀၁၄ ခုနှစ် MNL Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲမှ စ၍ ပွဲစဉ်(၃)ပွဲ ပါဝင်ကစားခွင့် မပြုရန်နှင့် ဒဏ်ကြေးငွေ ကျပ် ငါးသိန်း ပေးဆောင်ရန် ပြစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဒီထက်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုတာကို ပိုတွေးမိနေတယ်ဗျာ…